5 Waxyaabood Oo Haweenka Ay Dhahaan Marka Aysan Ninka Rabin - Aayaha
5 Waxyaabood Oo Haweenka Ay Dhahaan Marka Aysan Ninka Rabin
Aayaha editorJune 26, 2020
Haweenka waa kuwa ugu xariifnimada badan marka la eego ragga iyo dumarka. Waxay ogyihiin waxa saxda ah ee la yiraahdo xaaladda markaas lagu jiro, kuma adkeysan kartid dhammaan waxa aad rabtid balse haddii ay haweeney aysan dareemin inaad ku filantahay inaad xiriir la sameysid, dhulka ayay ku dhigee iyadoo aanan ku niyad jabin, waxayna wax muuqdo ka dhigeysaa kuwo aanan muuqan.
Waa kuwaan hadallada iyo qababka ugu badan ay haweenka ragga iskaga celiyaan.
Xiriir diyaar uma ihi hadda
Hadalkaan waa mid can ah, waxaa intabadan isticmaala haweenka marka ay ninka u arkaan inuusan ku habooneyn, marka hadalkaan ujeedkiisa ayaa ah inay iskaga celiyaan, iyagoo rajo ku galinaya inay jiri karto rajo kale oo berry ah, waana mid been ah badanaa waqtiyada.
Noocaas kuuma arko
Haddii aad waligaa hadalkaan ka maqshid haweeney aad jeceshahay, ogoow wali qadka saaxiibnimada lee ku jirtaa, haweenka hadalkaan uma isticmaalaan ragga ay sida buuxda u necebyihiin waxay u isticmaalaan ragga ay rabaan inay saaxiib uun la ahaadaan balse ay aysan marnaba shukaansan.
Qof kalaa xiriir laleeyahay
Haku dhicin qadkaas waxay bedeli doontaa waxa kasta si kasta, daraasad ayaa soo bandhigtay in haweenka ay been ka sheegaan xiriirkooda si ay iskaga si kiyaan qof jecel balse aysan jecleyn, iyadoo sidaas ay tahay oo ay ku dhahday qof kale Ayaan xiriir lalaeeyahay ayuu intabadan xiriirka shaqeeyaa.
Waanka xumahay waan mashquul badanahay
Waxaad weydiisay dalxiis waqtiyeysan ama taariiqeysan inaad u wadatid, waxaadna heshay jawaabtaan, hagaag, waanka xumahay balse sababta inaadan muhiim u ahayn, nin kale oo ay jeceshahay ayaa usoo bandhigi doonaa dalabkaas, wax walbo ayay ku bixineysaa iska day inay diidee, waana su’aal muhiim ah, xusuuso mar walba.
Waxan hadda diiradda saarayaa nafteyda
Maya, iskuma dayeyso inay diiradda saarto nafteeda, waxay isku dayeysaa inay iska kaa fogeyso isla markaana fursado badan siiso ragga ku haboon oo ay daneyneyso, waxa ay leedahay si dhab ah u qaadan shaqsi ahaan, waa aragtideeda kumana haboonid.
Si caadi aha gabdhaha waxay fahmaan marka ay ku arkaan inaad leedahay leedahay mudnaanta saaxiibtinimo iyo inkale.
Haka aqbalin qorshihiisa guurka illaa aad si daacad ah uga jawaabto saddexdaan su’aalood